Coutinho Muxuu Ka Yiri Hadii Neymar Uu Kusoo Laabanayo Barca & Saxiixa Cusub Ee Arthur %
Neymar gacmo furan ayaa lagu soo dhaweyn doonaa hadii uu go’aan sado inuu dib ugu soo laabto Barcelona, sida uu sheegay ciyaaryahanka ay isku dalka kasoo wada jeedaan ee Philippe Coutinho, kaasoo khadka dhexe ka dheela.
Fasal ciyaareedkii hore ayuu ciyaaryahankaan heerka caalami ee Brazil, uu uga biiray Bluagrana, dhigeeda Paris Saint-Germain, markaasoo lagu soo iibsaday aduun lacageed dhan 222 Milyan oo ka dhigtay midka dunida ugu qaalisan.
Lacagtaas oo ay Barcelona, gacanta ku dhigtay ayaa waxay ka saaciday inay Coutinho, ay kasoo dejiso Camp Nou, waxaana sidoo kale ay lasoo wareegtay ciyaaryahano, oo ay kamid yihiin Dembele, Yerry Mina iyo kuwa kale.
“Nolasha ayaa sidaas noqon karta, laakiin waxaa qabaa dareen lamid ah midkii [Ivan] Rakitic,” ayuu Coutinho ka sheegay munaasabad uu ka qeyb galay taasoo ku saabsaneed Mediterranean International Cup.
“Waa ciyaaryahan weyn, waxaan uwada dheelaan xulka qaranka, waana ku farax-sanahay midaas, waxay noqon lahayd mid wanaagsan hadii uu dib usoo laabanayo [Neymar], dabcan waana ufuri doonaa albaabada.
Mar uu ka hadlayay saxiixa cusub ee Barcelona, wiilka lagu magacaabo ee Arthur, ayuu yiri: “Waa ciyaaryahan kale oo wanaagsan, kaasoo ka yimid heer caalami ah, waana mid aad u wanaagsan.
“Waxa uu keenayo waa tayo badan iyo dabeecad tayo leh garoonka dhexdiisa, Taas waxaa laga arki kartaa kulan kasta oo aad daawatid isaga, sidoo kale waa ciyaaryahan weyn oo garoonka rag ku ah,” ayuu hadalkiisa kusoo xiray.
Sikastaba, ciyaaryahan Arthur oo ay Barcelona kusoo iibsan doonto aduun dhan 30 Milyan oo Yuuroo bisha Julaayo ee sanadka soo aadan ee 2019, ayaa wuxuu udhashay wadanka Brazil, waana mid wax qabad fiican leh.